C&S Wholesale Grocers hanome saron-tava 10000 KN95 ho an'ny hopitaly, fanohanana ny banky sakafo
Ny C&S Wholesale Grocers, orinasa mpamatsy ambongadiny lehibe indrindra ao amin'ny firenena, tamin'ny alakamisy dia nanambara fa misy hetsika fanampiana manerana ny firenena amin'ny ady amin'ny areti-mifindra virus coronavirus, ao anatin'izany ny fanomezana mihoatra ny 300000 $ izay hanome sarontava 10000 KN95 ho an'ireo hopitaly any amin'ireo faritra tena voa mafy, toy ny .. .
Azonao atao ny manary ilay sarontava amin'ny valizy: ny tsara sy ny ratsy
Ny areti-mifindra coronavirus dia nitondra famaritana vaovao ho an'ny fiarahamonina vaovao izay ahitana ny fanaovana sarontava tarehy ankehitriny. Na dia mazava aza ny tombotsoan'ny sarontava, ny fampiasana be dia be dia be dia be ny drawbacks: fahasosorana amin'ny tarehy, fahasahiranana miaina, fananganana hamandoana ary ireo solomaso manjavozavo. MORE: tarehy ...
Saron-tava, saron-tava N95 ary sarontava fandidiana: Ho an'iza izy ireo ary ahoana no fampiasana azy ireo
Ny CDC dia nilaza fa ny olon-drehetra dia tokony hisaron-tava tsy misy fitsaboana isaky ny mifanerasera amin'ny hafa ianao mandritra ny areti-mifindra coronavirus. Fa inona no tsy itovizany amin'ireo saron-tarehy amin'ny sarimihetsika? Ny sarontava tarehy dia nanjary lohahevitra niadian-kevitra niadian-kevitra tamin'ny vanim-potoana nitapahan'ny valanaretina coronavirus. Matahotra ny ...
Saron-tava 100.000 N95 voalohany misy baiko 24M tonga tany Los Angeles
LOS ANGELES - Tonga tamin'ny alakamisy ny 100.000 amin'ny sarontava kilasy N95 nidina 24 tapitrisa voalohany izay baikon'ny tanànan'i Los Angeles ary haparitaka amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpamaly voalohany. "Manana fahefana hividy tsy mampino ilay tanàna, ka ampiasainay hividy amin'ny ampahany betsaka amin'ny pr ambany ...
Saron-tava N95 sy ny Coronavirus: Famokarana bebe kokoa
Mba hamahana ny fitomboan'ny fangatahana saron-tava mandritra ny fihanaky ny aretina coronavirus, COVID-19, dia mamelombelona haingana ny famokarana i Honeywell ary manao sarontava N95 an-tapitrisany any Etazonia. Manitatra ny asa famokarana ao amin'ny orinasa iray any Smithfield, Rhode Island izahay, izay mamokatra ...
Karazana saron-tava N95 iray mety hanimba bebe kokoa noho ny tsara
Zarao ao amin'ny Pinterest Ny manam-pahaizana dia milaza fa misy saron-tava N95 misy valves eo aloha miaro ny mpampiasa fa aza manakana azy tsy hanaparitaka COVID-19 amin'ny hafa akaiky azy. Mampitandrina ny vahoaka ny manampahaizana Getty Images mba tsy hanao karazana saron-tava N95 misy valves eo aloha. Nilaza izy ireo fa miaro ny ...
Fitsapana raha mahomby ny saron-tava N95 tsy voamarina
Hatramin'ny nanombohan'ny Covid-19 niparitaka tany Etazonia, dia nikely aina hikaroka sy hiaro ny saron-tava respirator ny N95, ny karazana izay manisy tombo-kase amin'ny tarehy ary manala ireo potipoti-paratra, miaro ireo mpiasa an-tsisiny tsy hidiran'ny coronavirus. Ny tsy fahampiana nasionaly dia nitarika ny fanjakana ...
Mandrara ny masony ny FDA, 3 herinandro aorian'ny fitsapana tsy nahomby
Noraran'ny sampan-draharahan'ny sakafo sy zava-mahadomelina ny mpanamboatra 65 tsy hivarotra sarontava ho an'ny fitsaboana. Saingy ny fihetsika dia tonga taorian'ny fitsapana tamin'ny volana lasa teo fa ny sarontava dia tsy mahafeno fenitra. Nandritra ny telo herinandro dia namela ny fivarotana karazana sarontava endrika N95 ho an'ny Amerikanina ny sampana fitantanana sakafo sy zava-mahadomelina ...
Saron-tava KN95 sy ny areti-mandringana
Araka ny tranonkalan'ny Health Canada dia nanomboka nanome alalana ny fampiasana saron-tava KN95 ho an'ny tanjona ara-pahasalamana izy ireo raha ny areti-mandoza no nahazoana azy. "Mba hanitarana ny fisian'ny respirator N95 mandritra ny areti-mandringana, dia azo ekena ihany koa ny fenitra mifandimby izay… tafiditra ao anatin'izany ny fitsaboana sy ...
Ny olana ara-pahasalamana any Canada dia mampatsiahy ireo saron-tava KN95 vitsivitsy natao tany Shina
Ny sarontava dia "risika ara-pahasalamana sy fiarovana ', hoy ny bulletin navoakan'ny mpanafatra Geoff Leo · Vaovao CBC · Navoaka: 13 Mey 2020 5:38 PM CT | Nohavaozina farany: 14 Mey Health Canada dia nampatsiahy ny saron-tava KN95 novokarin'ny mpanamboatra sinoa am-polony taorian'ny fitsapana azy ireo nahita azy ireo ...
Ny endrika vaovao dia manampy ny mpampiasa ny saron-tava N95 ho mora miaina
Ny fitaovana dia manakana ny tsy fahampiana oksizena ao amin'ny respiratoria manakana ny coronavirus. Ny fanaovana sarontava sarimihetsika avo lenta dia afaka miaro amin'ny coronavirus vaovao. Fa aorian'ny ora vitsivitsy, ireo fitaovana mifono tery ireo dia mety hanasarotra ny fifohana rivotra ihany koa. Ny respirator N95, ohatra, dia malaza a ...
Lincoln Laboratory dia mikambana amin'ny MIT sy ny hafa amin'ny fanandramana ny N95 sy ny saron-tava respiratorina nafarana mba hanamarinana ny fahaizany mitazona ny sombiny sy ny ra. Hatramin'ny nanombohan'ny Covid-19 niely tany Etazonia, dia nitady izay hahitana sy hiarovana ny saron-tava respirator N95, ilay karazana izay manisy tombo-kase ...